အိပ်မက်ဆိုးများမက်ဖူးကြပါသလား..? ဘယ်လို အိပ်မက်ဆိုးမက်ရင် ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ် ဆိုတာလေးတွေ သိထားရအောင် - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / ဗေဒင်ကဏ္ဍ / အိပ်မက်ဆိုးများမက်ဖူးကြပါသလား..? ဘယ်လို အိပ်မက်ဆိုးမက်ရင် ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ် ဆိုတာလေးတွေ သိထားရအောင်
အိပ်မက်ဆိုးများမက်ဖူးကြပါသလား..? ဘယ်လို အိပ်မက်ဆိုးမက်ရင် ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ် ဆိုတာလေးတွေ သိထားရအောင်
Apann Pyay 6:31 PM ဗဟုသုတအစုံ , ဗေဒင်ကဏ္ဍ Edit
အိပ်မက်ဆိုးများ၏ မြင်မက်ရသည့် အကြောင်းရင်းနှင့် အဓိပ္ပါယ်များ
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သေသွားပြီလို့ အိပ်မက်မက်ဖူးပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် မြွေတစ်ကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အခြားအန္တရာယ်ရှိတဲ့ သတ္တ၀ါတစ်ကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အလိုက်ခံရတာမျိုး အိပ်မက်မက်ဖူးပါသလား။ မက်ဖူးတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုအိပ်မက်မျိုးတွေ မက်တာ သင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး မကောင်းတဲ့အိပ်မက်တွေကြောက်စရာအိပ်မက်တွေကို မေ့လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုအိပ်မက်တွေကို အိပ်မက်ဆိုးလို့ ခေါ်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေမှာ အိပ်မက်ဆိုးမက်ပြီး ညနက်သန်းခေါင်လန့်နိုးလာတတ်ပါတယ်။ အိပ်မက်ဆိုးတွေကြောင့် ထိတ်လန့်တုန်လုပ်ရပြီး အမြန်ဆုံးမေ့ပစ်လိုက်ချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိပ်မက်ဆိုးတွေက အဆိုးချည်းပဲတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
လေ့လာမှုတွေအရ မကြာခဏအိပ်မက်ဆိုးမက်တတ်သူတွေက တီထွင်ဖန်တီးမှုအားကောင်းသူတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဆိုးထဲက အကောင်းတစ်ခုပါပဲ။ ပြီးတော့ အိပ်မက်ဆိုးတွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အတွင်းစိတ်နဲ့ စိုးရိမ်သောကတွေကို ကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုတာရော သင်သိပါသလား။ တကယ်တော့ အိပ်မက်ဆိုးတွေမှာ တိကျသေချာတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တစ်ခုရှိနေပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ မသိစိတ်၊ အတွေးနဲ့ ခံစားချက်တွေကို ပြန်ဆိုပေးနိုင်ပါတယ်။
အခုလိုအိပ်မက်ဆိုးအကြောင်းတွေ ဖတ်နေရတဲ့အချိန်မှာ အိပ်မက်ဆိုးတွေက ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲဆိုတာနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ မက်ရတာလဲဆိုတာကို သိချင်လာမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့အများစုမှာ မက်လေ့ရှိတဲ့ အိပ်မက်ဆိုးတွေအကြောင်းနဲ့ ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်လဲဆိုတာကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
အိပ်မက်ထဲမှာ အမြင့်တစ်နေရာကနေ ပြုတ်ကျပြီး တစ်ယောက်ယောက်က ခြေထောက်ကို ဆွဲလိုက်သလို လှုပ်သွားတာကို ကြုံဖူးပါသလား။ ဒီလို အမြင့်ကနေပြုတ်ကျတဲ့ အိပ်မက်ဆိုးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က လွတ်လပ်မှုနဲ့ အခွင့်အာဏာ မရှိတာကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ဘ၀မှာ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ အခြေအနေတစ်ခုခုရှိနေတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။
အိပ်မက်ထဲမှာ မတော်တဆမှုတစ်ခုခုဖြစ်တာ ဒါမှမဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာက ကျွန်တော်တို့ဘ၀ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ဖော်ညွှန်းပါတယ်။ ဒီလိုအိပ်မက်ဆိုးတွေ မြင်မက်ရင် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးထားမှု တိုးမြင့်လာအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုနေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဒါမှမဟုတ် ကပ်ဆိုးတစ်ခုခုကြုံတွေ့ရတာ
လေမုန်တိုင်းတိုက်တာ၊ ငလျင်လှုပ်တာ၊ ဆူနာမီလှိုင်းကြီးတွေလိုမျိုး သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကို မြင်မက်ပြီး လွတ်အောင် ထွက်ပြေးရတာမျိုးကို ကြုံဖူးပါသလား။ ဒီအိပ်မက်တွေကတော့ မကြာခင် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတော့မယ့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုခု ဒါမှမဟုတ် အခြေအနေတစ်ခုခုကို ကျွန်တော်တို့ စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့နေတယ်ဆိုတာကို ညွှန်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာကြုံတွေ့ရတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့လည်း သက်ဆိုင်ပါတယ်။
အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေ လွတ်သွားတာ ဒါမှမဟုတ် လွဲချော်မှားယွင်းသွားတာ
ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းတက်နေတုန်းကဆိုရင် စာမေးပွဲမဖြေလိုက်ရတာတို့၊ စာမေးပွဲဝင်ဖြေနေပေမယ့် ဘာစာမှမရတာတို့၊ စာမေးပွဲကျတာတို့ စတာတွေကို မက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုအိပ်မက်တွေကတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ ရှိနေတဲ့ ပြင်ပဖိအားတွေနဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကျမှုတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်လောကမှ ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ရင် လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် အိပ်မက်ထဲမှာတော့ ဘယ်တော့မှ အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
လူသေတွေ တွေ့မြင်တာ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တိုင်သေသွားတာကို မြင်ရတာ
လူသေတွေ မြင်တဲ့အကြောင်းကို လူအများစု အိပ်မက်မက်ဖူးကြပါတယ်။ တစ်ချို့ဆိုရင် သူတို့ကိုယ်တိုင် သေဆုံးတာကို မြင်မက်ပြီး ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ကြရပါတယ်။ ကွယ်လွန်သွားတာ သိပ်မကြာသေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ချစ်ခင်ရသူတွေကိုလည်း မကြာခဏအိပ်မက်မက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုမြင်မက်ရတာဟာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ သူတို့အပေါ်မှာ ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာအရ တွယ်ငြိနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ ကိုယ်တိုင်သေတာကို မြင်တွေ့ရတာကတော့ အတွင်းစိတ်ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီး အကောင်းဖက်က တိုးတက်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကျွန်တော်တို့ကို လိုက်လံတိုက်ခိုက်နေတာမျိုး အိပ်မက်မက်တတ်ကြပါတယ်။ ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့လူတွေက လိုက်ပြီး သေနတ်တွေ အခြားလက်နက်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်က တိုက်ခိုက်တာ စတဲ့ အိပ်မက်တွေက ကျွန်တော်တို့ဘ၀မှာ ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲတစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခက်အခဲကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့ထက် ထွက်ပြေးသွားချင်စိတ်များနေတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လမ်းခွဲသွားတဲ့ ချစ်သူ၊ လက်တွဲဖော်ကို မြင်မက်တာ
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ချစ်သူ၊ ဇနီးမယားကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာ၊ အဝေးကိုထွက်သွားတာ၊ ပြန်ပေးဆွဲခံလိုက်တာ စသဖြင့် မြင်မက်တတ်ပါတယ်။ ဒီအိပ်မက်တွေက ကျွန်တော်တို့မှာ စွန့်ပစ်ခံခဲ့ရတဲ့ ခံစားချက်တွေ များနေတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအိပ်မက်တွေနောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ သူတို့အတွက် မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ ခံစားချက်၊ စိတ်မလုံခြုံမှုတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
အခြေအနေဆိုးတစ်ခုမှာ ပိတ်မိနေတာ ဒါမှမဟုတ် ရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်တဲ့ အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုကို စိတ်မပါပဲ လုပ်ဆောင်နေရတဲ့အခါမျိုးမှာ ဒီလိုအိပ်မက်တွေ မြင်မက်တတ်ပါတယ်။ ချစ်သူစုံတွဲပြဿနာတစ်ခုခု၊ အလုပ်မှာ အဆင်မပြေမှုတစ်ခုခုကြောင့် ဒီလိုအိပ်မက်တွေ မက်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ အစွမ်းအစကို အပြည့်အ၀ထုတ်သုံးခွင့် မရဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါပဲ။
အိပ်မက်ထဲမှာ ကိုယ်တုံးလုံး ဖြစ်နေတာ
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ အိပ်မက်ထဲမှာ အ၀တ်အစားမပါပဲ ကိုယ်တုံးလုံးဖြစ်နေတယ်လို့ မြင်မက်ရပါတယ်။ ဒီလိုအိပ်မက်ကို ကျွန်တော်တို့ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးတဲ့ကိစ္စတွေ၊ မျက်နှာပျက်စရာကိစ္စတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ မြင်မက်တတ်ပါတယ်။ ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သွင်ပြင်လက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူတွေ ဘယ်လိုထင်မြင်ယူဆကြမလဲဆိုတာကို စိုးရိမ်စိတ်တွေက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ အိပ်မက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
လူအများစုကတော့ အိပ်မက်ထဲမှာ ပင့်ကူတို့ မြွေတို့ကို မြင်ရရင် ကြောက်တတ်ပါတယ်။ ဒီသတ္တ၀ါတွေက အပြင်မှာတကယ်တွေ့ရရင်တောင်မှ ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိပ်မက်တွေမှာတော့ သူတို့ကို အခြားအဓိပ္ပါယ်ရှိပါသေးတယ်။ အိပ်မက်ထဲမှာ ပင့်ကူမြင်ရတာက သင့်ရဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကို ကာကွယ်ပေးနေတဲ့ စွမ်းအားတစ်ခုရှိနေတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။ မြွေကတော့ အသွင်ပြောင်းလဲခြင်းရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်ပြီး အရေးကိစ္စတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ သဘောကို ဆောင်ပါတယ်။
ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ သသှေားပွီလို့ အိပျမကျမကျဖူးပါသလား။ ဒါမှမဟုတျ မွှတေဈကောငျပဲဖွဈဖွဈ အခွားအန်တရာယျရှိတဲ့ သတ်တဝါတဈကောငျပဲဖွဈဖွဈ အလိုကျခံရတာမြိုး အိပျမကျမကျဖူးပါသလား။ မကျဖူးတယျဆိုရငျတော့ ဒီလိုအိပျမကျမြိုးတှေ မကျတာ သငျတဈယောကျတညျးမဟုတျပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ အားလုံး မကောငျးတဲ့အိပျမကျတှကွေောကျစရာအိပျမကျတှကေို မလေ့ရှေိ့ပါတယျ။ ဒီလိုအိပျမကျတှကေို အိပျမကျဆိုးလို့ ချေါပါတယျ။
တဈခါတဈလမှော အိပျမကျဆိုးမကျပွီး ညနကျသနျးခေါငျလနျ့နိုးလာတတျပါတယျ။ အိပျမကျဆိုးတှကွေောငျ့ ထိတျလနျ့တုနျလုပျရပွီး အမွနျဆုံးမပေ့ဈလိုကျခငျြကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အိပျမကျဆိုးတှကေ အဆိုးခညျြးပဲတော့ မဟုတျပါဘူး။
လလေ့ာမှုတှအေရ မကွာခဏအိပျမကျဆိုးမကျတတျသူတှကေ တီထှငျဖနျတီးမှုအားကောငျးသူတှေ ဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အဆိုးထဲက အကောငျးတဈခုပါပဲ။ ပွီးတော့ အိပျမကျဆိုးတှကေ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အတှငျးစိတျနဲ့ စိုးရိမျသောကတှကေို ကိုယျစားပွုတယျဆိုတာရော သငျသိပါသလား။ တကယျတော့ အိပျမကျဆိုးတှမှော တိကသြခြောတဲ့ အဓိပ်ပါယျတဈခုရှိနပွေီး ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ကိုယျရညျကိုယျသှေးနဲ့ မသိစိတျ၊ အတှေးနဲ့ ခံစားခကျြတှကေို ပွနျဆိုပေးနိုငျပါတယျ။
အခုလိုအိပျမကျဆိုးအကွောငျးတှေ ဖတျနရေတဲ့အခြိနျမှာ အိပျမကျဆိုးတှကေ ဘာအဓိပ်ပါယျလဲဆိုတာနဲ့ ဘာဖွဈလို့ မကျရတာလဲဆိုတာကို သိခငျြလာမယျထငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့အမြားစုမှာ မကျလရှေိ့တဲ့ အိပျမကျဆိုးတှအေကွောငျးနဲ့ ဘယျလိုအဓိပ်ပါယျလဲဆိုတာကို ဝမြှေလိုကျပါတယျ။
အိပျမကျထဲမှာ အမွငျ့တဈနရောကနေ ပွုတျကပြွီး တဈယောကျယောကျက ခွထေောကျကို ဆှဲလိုကျသလို လှုပျသှားတာကို ကွုံဖူးပါသလား။ ဒီလို အမွငျ့ကနပွေုတျကတြဲ့ အိပျမကျဆိုးရဲ့ အဓိပ်ပါယျက လှတျလပျမှုနဲ့ အခှငျ့အာဏာ မရှိတာကို ကိုယျစားပွုပါတယျ။ နောကျတဈမြိုးပွောရရငျ ကြှနျတျောတို့ဘဝမှာ ထိနျးမနိုငျသိမျးမရ အခွအေနတေဈခုခုရှိနတေဲ့ သဘောဖွဈပါတယျ။
အိပျမကျထဲမှာ မတျောတဆမှုတဈခုခုဖွဈတာ ဒါမှမဟုတျ ထိခိုကျဒဏျရာရရှိတာက ကြှနျတျောတို့ဘဝရဲ့ အားနညျးခကျြတှကေို ဖျောညှနျးပါတယျ။ ဒီလိုအိပျမကျဆိုးတှေ မွငျမကျရငျ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ တနျဖိုးထားမှု တိုးမွငျ့လာအောငျ လုပျဆောငျဖို့ လိုနတေဲ့သဘောဖွဈပါတယျ။
သဘာဝဘေးအန်တရာယျ ဒါမှမဟုတျ ကပျဆိုးတဈခုခုကွုံတှရေ့တာ
လမေုနျတိုငျးတိုကျတာ၊ ငလငျြလှုပျတာ၊ ဆူနာမီလှိုငျးကွီးတှလေိုမြိုး သဘာဝဘေးအန်တရာယျတှကေို မွငျမကျပွီး လှတျအောငျ ထှကျပွေးရတာမြိုးကို ကွုံဖူးပါသလား။ ဒီအိပျမကျတှကေတော့ မကွာခငျ ရငျဆိုငျကွုံတှရေ့တော့မယျ့ ဖွဈရပျတဈခုခု ဒါမှမဟုတျ အခွအေနတေဈခုခုကို ကြှနျတျောတို့ စိုးရိမျကွောကျရှံ့နတေယျဆိုတာကို ညှနျပွနတောဖွဈပါတယျ။ တဈနတေ့ာကွုံတှရေ့တဲ့ စိတျဖိစီးမှုတှနေဲ့လညျး သကျဆိုငျပါတယျ။
အရေးကွီးတဲ့ကိစ်စတှေ လှတျသှားတာ ဒါမှမဟုတျ လှဲခြျောမှားယှငျးသှားတာ
ကြှနျတျောတို့ ကြောငျးတကျနတေုနျးကဆိုရငျ စာမေးပှဲမဖွလေိုကျရတာတို့၊ စာမေးပှဲဝငျဖွနေပေမေယျ့ ဘာစာမှမရတာတို့၊ စာမေးပှဲကတြာတို့ စတာတှကေို မကျလရှေိ့ပါတယျ။ ဒီလိုအိပျမကျတှကေတော့ ကြှနျတျောတို့မှာ ရှိနတေဲ့ ပွငျပဖိအားတှနေဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှကွေောငျ့ ဖွဈပျေါလာတဲ့ စိုးရိမျကွောငျ့ကမြှုတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ အပွငျလောကမှ ကြှနျတျောတို့အကောငျးဆုံးလုပျနိုငျရငျ လုပျနိုငျပါလိမျ့မယျ ဒါပမေယျ့ အိပျမကျထဲမှာတော့ ဘယျတော့မှ အဆငျပွမှောမဟုတျပါဘူး။
လူသတှေေ တှမွေ့ငျတာ ဒါမှမဟုတျ ကိုယျတိုငျသသှေားတာကို မွငျရတာ
လူသတှေေ မွငျတဲ့အကွောငျးကို လူအမြားစု အိပျမကျမကျဖူးကွပါတယျ။ တဈခြို့ဆိုရငျ သူတို့ကိုယျတိုငျ သဆေုံးတာကို မွငျမကျပွီး ကွောကျလနျ့တုနျလှုပျကွရပါတယျ။ ကှယျလှနျသှားတာ သိပျမကွာသေးတဲ့ ကြှနျတျောတို့ ခဈြခငျရသူတှကေိုလညျး မကွာခဏအိပျမကျမကျတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုမွငျမကျရတာဟာ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ သူတို့အပျေါမှာ ခံစားမှုပိုငျးဆိုငျရာအရ တှယျငွိနဆေဲဖွဈတာကွောငျ့ပါ။ ကိုယျတိုငျသတောကို မွငျတှရေ့တာကတော့ အတှငျးစိတျပွောငျးလဲမှုတှကွေောငျ့ဖွဈပွီး အကောငျးဖကျက တိုးတကျမှုတှေ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
တဈခါတဈလမှော ကြှနျတျောတို့ကို လိုကျလံတိုကျခိုကျနတောမြိုး အိပျမကျမကျတတျကွပါတယျ။ ဘယျကမှနျးမသိတဲ့လူတှကေ လိုကျပွီး သနေတျတှေ အခွားလကျနကျတှနေဲ့ တိုကျခိုကျတာ၊ ဒါမှမဟုတျ တိရိစ်ဆာနျတဈကောငျက တိုကျခိုကျတာ စတဲ့ အိပျမကျတှကေ ကြှနျတျောတို့ဘဝမှာ ရငျဆိုငျတှကွေုံ့နရေတဲ့ အခကျအခဲတဈခုခုကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ ဒီအခကျအခဲကို ရငျဆိုငျဖွရှေငျးဖို့ထကျ ထှကျပွေးသှားခငျြစိတျမြားနတောကွောငျ့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
လမျးခှဲသှားတဲ့ ခဈြသူ၊ လကျတှဲဖျောကို မွငျမကျတာ
တဈခါတဈလမှော ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ခဈြသူ၊ ဇနီးမယားကို ဆုံးရှုံးလိုကျရတာ၊ အဝေးကိုထှကျသှားတာ၊ ပွနျပေးဆှဲခံလိုကျတာ စသဖွငျ့ မွငျမကျတတျပါတယျ။ ဒီအိပျမကျတှကေ ကြှနျတျောတို့မှာ စှနျ့ပဈခံခဲ့ရတဲ့ ခံစားခကျြတှေ မြားနတေဲ့သဘောပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီအိပျမကျတှနေောကျကှယျက အကွောငျးရငျးကတော့ ကြှနျတျောတို့ဟာ သူတို့အတှကျ မကောငျးဘူးဆိုတဲ့ ခံစားခကျြ၊ စိတျမလုံခွုံမှုတှကွေောငျ့ ဖွဈပါတယျ။
အခွအေနဆေိုးတဈခုမှာ ပိတျမိနတော ဒါမှမဟုတျ ရှောငျလှဲလို့မရနိုငျတဲ့ အလုပျကိစ်စတဈခုကို စိတျမပါပဲ လုပျဆောငျနရေတဲ့အခါမြိုးမှာ ဒီလိုအိပျမကျတှေ မွငျမကျတတျပါတယျ။ ခဈြသူစုံတှဲပွဿနာတဈခုခု၊ အလုပျမှာ အဆငျမပွမှေုတဈခုခုကွောငျ့ ဒီလိုအိပျမကျတှေ မကျတယျဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့မှာရှိတဲ့ အစှမျးအစကို အပွညျ့အဝထုတျသုံးခှငျ့ မရဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျပါပဲ။
အိပျမကျထဲမှာ ကိုယျတုံးလုံး ဖွဈနတော
တဈခါတဈလမှော ကြှနျတျောတို့ဟာ အိပျမကျထဲမှာ အဝတျအစားမပါပဲ ကိုယျတုံးလုံးဖွဈနတေယျလို့ မွငျမကျရပါတယျ။ ဒီလိုအိပျမကျကို ကြှနျတျောတို့ ဂုဏျသိက်ခာပိုငျးဆိုငျရာ ထိပါးတဲ့ကိစ်စတှေ၊ မကျြနှာပကျြစရာကိစ်စတှနေဲ့ ရငျဆိုငျရတဲ့အခါ မွငျမကျတတျပါတယျ။ ပွောရရငျ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ သှငျပွငျလက်ခဏာနဲ့ပတျသကျပွီး လူတှေ ဘယျလိုထငျမွငျယူဆကွမလဲဆိုတာကို စိုးရိမျစိတျတှကေ ပေါကျဖှားလာတဲ့ အိပျမကျတှေ ဖွဈပါတယျ။
လူအမြားစုကတော့ အိပျမကျထဲမှာ ပငျ့ကူတို့ မွှတေို့ကို မွငျရရငျ ကွောကျတတျပါတယျ။ ဒီသတ်တဝါတှကေ အပွငျမှာတကယျတှရေ့ရငျတောငျမှ ကွောကျစရာကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အိပျမကျတှမှောတော့ သူတို့ကို အခွားအဓိပ်ပါယျရှိပါသေးတယျ။ အိပျမကျထဲမှာ ပငျ့ကူမွငျရတာက သငျ့ရဲ့မကောငျးတဲ့အတှေးတှကေို ကာကှယျပေးနတေဲ့ စှမျးအားတဈခုရှိနတေဲ့ သဘောဖွဈပါတယျ။ မွှကေတော့ အသှငျပွောငျးလဲခွငျးရဲ့ သင်ျကတေဖွဈပွီး အရေးကိစ်စတှကေို ဖွရှေငျးနိုငျခွငျးဆိုတဲ့ သဘောကို ဆောငျပါတယျ။